पूर्वाञ्चल भ्रमणको सम्झना – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
पूर्वाञ्चल भ्रमणको सम्झना
२०७७ चैत्र १४, शनिबार ११:५० गते
तीन जना चालक दलका सदस्य, हामी तीन शिक्षक सदस्य क्रमशः कमला पोख्रेल म्याडम, लक्ष्मीकान्त घिमिरे सर, म र कक्षा दसका ४२ जना विद्यार्थीसहित गत वर्ष पूर्वी नेपालको अवलोकन भ्रमणमा प्रातः ६ः३० बजे विद्यालयको न्यानो आँगनीलाई छोडेर त्यसतर्फ प्रस्थान गर्यौँ । प्रत्येक वर्ष गरिने यस्ता शैक्षिक यात्राहरुले भविष्यका सपना सँगाल्ने कलिला बाबुनानीहरुलाई संसारका सबै दृश्यहरु हेर्न अत्यन्त उत्सुक बनाएका हुन्छन् । मैले उनीहरुसँग चार दशकसम्म यस्तै स्वप्निल यात्राहरुमा साथ दिँदै आएको छु ।
विद्यार्थीहरुको अगुवाइ गर्ने शिक्षक, अभिभावक र साथ–सङ्गति भएर मैले धेरैपटक उनीहरुसँग विभिन्न यात्राहरु गरेको छु। त्यस्ता धेरै यात्राहरुमध्ये गत वर्ष पनि सधैँका वर्षझैँ कक्षा १० का विद्यार्थीहरुको साथमा पूर्वी नेपालको एउटा अर्को नयाँ यात्रा–शृङ्खला सुरू गर्दैछु । कक्षामा भइरहने दैनिक क्रियाकलापभन्दा भिन्नझैँ देखिए तापनि यो क्रियाकलाप अझ धेरै मह¤व राख्ने अर्थपूर्ण शैक्षिक क्रियाकलाप हो ।
यसबाट विद्यार्थीहरुमा नयाँ ठाउँको अवलोकन गर्न पाउने थप उत्सुकता पैदा हुन्छ । उनीहरुभित्र दबिएर बसेको भावनात्मक प्रतिभाले प्रस्फुटन हुने अवसर पाउँछ । प्रकृतिको नियममा हरेक मान्छेले जन्मजात कुनै एउटा निश्चित क्षमता लिएर आएको हुन्छ । उनीहरुभित्रको प्रतिभा र क्षमताले अवलोकनमा देखिएका र भेटिएका विषयलाई आफूअनुकूल छनोट गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन् । सानो बारूदको झिल्कोले भविष्यमा विशाल रुप प्राप्त गर्न सक्छ । यस्ता अवलोकन भ्रमणहरुले ससाना कलिला उमेरका बाबुनानीहरुलाई असाध्यै गहिरो प्रभाव पार्न सक्छन् । व्यक्तिले आफ्नो निजी अनुभूतिबाट संसार आँकलन गर्न मार्गको खोजी गर्दछन् ।
यात्राको दौरानमा देखिएका ठाउँहरु, मठमन्दिरहरु, ऐतिहासिक मह¤वका विभिन्न विषयहरु आदिको सन्दर्भमा आफ्नो दृष्टिकोणसहित ज्यादै सचेततापूर्वक सबै कुरा सम्भव भएसम्म टिपोट राख्न बिर्सनुहुँदैन । यात्राको क्रममा व्यक्तिगत स्वास्थ्यले पनि उत्तिकै मह¤व राख्दछ । स्वास्थ्य प्रतिकूल भयो भने पूरै यात्रा अभिशप्त हुन सक्छ । त्यसैले, खानपानप्रति असाध्यै होसियारी हुनु अनिवार्य छ । अस्वस्थकर वस्तु सेवन गर्नुभन्दा बरू एकदिन भोकै बस्दा ठूलो नोक्सानी नहुन सक्छ । बिक्रीका निम्ति ल्याइएका र स्वास्थ्यलाई अहितकर हुने कुनै पनि वस्तु शिक्षकका आँखा छलेर खरिद गर्ने र खाने गर्नुहुँदैन । आँखा छलेर वस्तु सेवन त गरिएला तर पेटले सत्य व्यवहार गर्दछ ।
कतिपयलाई डायरिया, बोमिट र टाउको दुखाइले हैरान बनाउन लाग्छ । परिणामतः यात्राको रमाइलो त परै जाओस् तर अवस्था झन् नर्कमय बनाइदिने सम्भावना त्यत्तिकै हुन्छ । निम्नकोटिका व्यक्ति विशेषले असाध्यै उच्छृङ्गल उद्दण्ड हुने र चर्को आवाज गरी बोल्ने एवं सडकछेउछाउमा भेटिएका यात्रुलाई जिस्क्याउनेजस्ता क्रियाकलापले गर्दा आफैँ अपमानित हुनुपर्ने र दण्डसजायको भागीदार पनि हुने सम्भावना रहन्छ । अतः शैक्षिक भ्रमणको समयमा नैतिक चरित्रको ख्याल गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।
म उमेरले घर्किंदै गएको छु, तर उनीहरु प्रत्येक वर्ष नयाँ उमेर, नयाँ उमङ्ग, नयाँ सपना र नयाँ बिहानी लिएर जीवनको सुखद उकाली धाउने गरेका छन् । मलाई उमेरले जिन्दगीको आधा बाटो चखाइसकेको छ, देखाइसकेको छ र विगतका उकाली—ओरालीहरु पुनः नफर्किने गरी लखेटिसकेको छ, तर यी कलिला बालाहरु जिन्दगीको यो ऊर्जाशील समयको यात्रामा मेरा हात र साथ लिन उत्सुक भएका हुन्छन् । निश्चय नै मेरो कर्तव्यले मलाई जागरूक गराएको छ । मसँग मेरो जिन्दगीको आधा बाटो सकिएको छ, तर उनीहरु प्रत्येक वर्ष थप उत्साहित भएर आएका छन् ।
यिनीहरुमा भएको ऊर्जाले मलाई थप उत्साह दिएको हुन्छ । मेरो भावुकताले मलाई के–के सोध्छ, के–के ? म चाहे पुरानो होऊँ, चाहे जिन्दगीको आधा बाटो रित्याइसकेको होऊँ, जो नयाँ उत्साह र जाँगर बोकेर आएको छ उसको साथमा अरु उत्साह र जागृतिका पाइलाहरु मिलाउन सक्नुपर्छ मैले भन्ने लाग्दछ । कर्तव्यले मलाई थाक्न पाउने अधिकार पनि त दिएको छैन ! आफूले हिँडिसकेको हिजोको सडकमा अर्को हिँड्न खोज्नेको नयाँ अनुभूतिको स्वाद चाख्नमा कुनै कमी गरिदिनुहुँदैन मैले । ऊ नयाँ छ । उसका दृष्टिहरुमा नयाँ बिहानी झुल्किएको छ । उसका पाइलाहरुले नयाँ दिनहरुलाई इसारा गरेका छन् । म प्रत्येक वर्ष यसरी नै भावुक बन्दछु । उनीहरुसँग साथमा साथ मिसाउँछु, रमाउँछु, नाच्छु, तर गज्जब भने अवश्य लाग्छ । उनीहरु जिन्दगीको भोगाइमा मास्तिर उक्लँदै छन् भने म तल ओर्लिंदै छु । यसरी नै वर्षौं बितेका छन् ।
यसपालाको यात्रा पनि त्यस्तैत्यस्तै कथा—कहानी र भावुकताका यस्तै मनोदशाहरुमा प्रारम्भ भयो । प्रातः ६ः३० बजे सुरू भएको आजको यो बसको हुइँक्याइँ चन्द्रनिगाहपुर (चपुर) आएर रोकिन्छ । बिहानको खाना सुखद नै भयो । सादा खाना र भोजनालयको आतिथ्य सत्कार राम्रो लाग्यो । छोटा–छोटा यात्राका अनुभव सँगालेका चौध–पन्ध्रवर्षे यी बालाहरुलाई यो यात्राले नयाँ ज्ञान प्रदान ग¥यो । सडकमा पर्ने विभिन्न दृश्यहरु उनीहरुले झ्यालबाटै हेरे, देखे र भएसम्मको भरपूर आनन्द लिए । धुर्मुस–सुन्तली फÞाउन्डेसनले निर्माण गरेको एकीकृत मुसहर बस्ती, बर्दिबास पुग्दा दिउँसोको १२ः४५ भएको थियो । प्रतिएक जनाको प्रवेश शुल्क २० रहेछ ।
बस्ती व्यवस्थित लाग्यो तर चेतनाको स्तर ज्यादै कमजोर रहेको मुसहर बस्ती फोहोरमैलो हुँदै थियो । दिउँसोको समयमा घरका महिला आमाछोरीहरुले ससाना बालबच्चाहरुदेखि लिएर ठूलै उमेरसम्मका पनि लिखा—जुम्रा केलाउँदै थिए । त्यहाँको अवलोकन सकिएपछि हामी अगाडि बढ्यौँ ।
मैले कोशी टप्पुको प्रसङ्ग चलाएँ, कोशी ब्यारेज आउनेबित्तिकै ती सबै उत्साहित भए । आआफ्ना सिटहरुबाट उभिए र सबैतर्फ अवलोकन गरे । म भने तिनै जिज्ञासु विद्यार्थी बाबुनानीहरुलाई नै अवलोकन गर्दै रहेँ । पुलको मुखमै ओर्लिएर पूरै पुलको पैदलयात्रा गरे ।
इलामको कन्याम, धरान, धनकुटाको हिले र जनकपुरको जानकी मन्दिरसम्मको यात्रा विशेष रह्यो । हाम्रा सबै छात्रछात्रा र शिक्षक मित्रहरु जनकपुरधामको रमणीय मन्दिरमा पुगेर श्रद्धापूर्वक दर्शनमा सहभागी हुने सोचाइमा थियौँ । मिथिला क्षेत्रमा रहेको जनकपुर सहर र जानकी मन्दिरको प्रसङ्ग उप्काउनासाथै राजा जनक र आदर्श नारी सीताको इतिहास ताजा भएर आउँछ । राजा जनक आदर्श राजा थिए ।
दुनियाँको अभिभारा र शासनको बागडोर आफ्नै हातमा लिएर पनि संसारका सबै खाले रमझम, तिर्खा र तृष्णाहरुबाट ती अलग रहन सकेका थिए । शरीरमा रहेर पनि शरीरबाट अलग्ग रहन सक्ने उच्च साधनाको अभ्यासमा रहेका राजालाई त्यसैले ’विदेही राजा जनक’ भनेर चिनिएको हो । ‘विदेही’ को अर्थ हुन्छ ‘देह’बाट अलग अथबा शरीरबाट अलग । वैदिक मान्यता र दर्शनअनुसार ‘शरीर र आत्मा’ दुई अलग किसिमका वस्तुहरुको संयोजनले निर्मित सिङ्गो मानवजीवनले पृथिवीमा रमण गर्न सक्दछ ।
आत्मा र शरीरबिना जीवनको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यसैले शरीरको स्याहारसम्भार, उपचार र पोषण जति सावधानपूर्वक गर्न आवश्यक छ, त्यसभन्दा कैयौँ गुणा अधिक आत्मोन्नतिका निम्ति स्याहारसम्भार, उपचार र पोषण जरूरी रहन्छ । आत्माले दिएको आदेश र निर्देशनलाई खुरूखुरू मान्न तयार रहने शरीरलाई ‘नोकर’को संज्ञा दिइएको छ । राम्रो जीवन निर्माणमा व्यक्तिको अथक साधना र श्रमबाट संस्कारित आत्माको ठूलो भूमिका रहन्छ ।
दिउँसोको ठीक ३ः३० बजेतिर हाम्रो अभिलाषाअनुसार जनकपुरको जानकी मन्दिर दर्शनमा सहभागी हुन सकियो ।
नेपालकी आदर्श छोरी सीता र आदर्श राजा जनकको बसोबास भएको दरबार र जानकी मन्दिरले मेरो आत्मिक संवेदनामा राजा जनकको इतिहासलाई सम्झँदा मात्रै पनि गहिरो तरङ्ग पैदा गरायो । मेरो देशको मात्र गौरव नभएर हाम्रो सिङ्गो धरतीका आदर्श राजा जनक यो संसारकै निम्ति अमूल्य सम्पदा र जिउँदो इतिहासको धरोहर हो भन्ने लाग्यो । जनकपुरअन्तर्गतको प्रदेश सरकारले समेत आफूलाई राजा जनकको उच्च आदर्शका पृष्ठहरुबाट शृङ्गार गर्न सकोस् भन्ने मेरो आग्रह र निवेदन राख्दछु ।
मन्दिर परिसरमा पुग्न नपाउँदै मगन्ते र झल्लाहरुको बिगबिगीले परिस्थितिलाई नमीठो बनाएझैँ लाग्यो । विकासका केही प्रयास हुन खोजे पनि सरसफाइ दयनीय छ । मन्दिरवरपरका शौचालयहरुको दुर्दशा, थुप्रै व्यवस्थापकीय कमीकमजोरीहरु र हरक्षेत्रमा देखिएको त्यहाँको असभ्यताले दुःखी बनायो ।
राजा जनकको आदर्श–जीवन, उनको पक्षधर र यही देशको सन्तान भएर पनि केवल मूकदर्शक हुनु परेकोमा मलाई औधि ग्लानि अनुभूत भयो । मभित्रको संवेदनालाई इतिहास र आदर्श धरोहरको सम्मान खातिर पवित्र नदी बनेर बहाउने कोसिस गरिरहेछु ।
यस मुलुकले लुम्बिनीको बुद्ध जन्मस्थली, राजधानी सहर काठमाडौँको पशुपतिनाथ र जनकपुरको जानकी मन्दिरजस्ता यी तीन सम्पदाको जतन मात्र गर्न सक्यो भने संसारलाई संस्कृतिको आदर्श मात्र देखाउन होइन, ‘धर्म’ पनि सिकाउन सक्ने क्षमता राख्छ भन्ने कुरामा दृढ विश्वास गर्दछु । भरोसा गर्दछु कि राजा जनकको धर्म, धार्मिक साधना र विदेह अभ्यासको पवित्र–भूमिले अत्युत्तम सन्तानहरु जन्माउन ढिलाइ गर्ने छैन ।
यस भूमिलाई प्राणभन्दा पनि बढी प्रेम मान्ने सन्तानहरुलाई जनकपुरको माटोले सीता छोरीलाई जन्माउन समर्थ भएझैँ चाँडै जन्माउन सकोस् । इतिहासको आदर्श सहर जनकपुरको आदर्शलाई निकट भविष्यको सुन्दर जनकपुरधामको आदर्श सम्पदा र धरोहरको रुपमा पाउन सकियोस्, मेरो प्रार्थना छ ।